Tartanka Quranka Karimka ah ee Puntland oo Maanta Garowe ka furmay (sawiro) – SBC
Tartanka Quranka Karimka ah ee Puntland oo Maanta Garowe ka furmay (sawiro)
Masjidka Huda ee Garowe waxaa galabta ka furmay Tartanka quranka karimka ah ee sodonka Jus Labadanka iyo tobanlka oo kalimaha kowaad iyo labad iyo sadexad ay ugu tartamayan 29 dhalinyaro ah oo ka yimid 10 magaalo oo ka mida Puntland oo ay maalgalinaysay Shirkada Talefonada Golis iyo Salama bankwaxaa sidoo kale qayb ka ahaa Mu’asasada Minjah oo iyadu fulinayso
Manta salaada jimcada ka dib waxaa ka furmay masaajidkahudaa ee magaalada Garowe tartanka quraanka kariima ka ah oo ay ku tartamayaantoban magaalo oo ka tirsan Puntland aynaka qayb galayaan 29arday oo matalayamagaaloyinka tartanka qayb galay kaalimahahorena ka soo galay tartamadii quaraanka karimka ah ee ka dhacaymagaaloyinkooda
Waxaana ka qayb galay furitaankii gudoomiyaha degmada Garowe,xubno ka socday shirkada golis iyo culuma awdiinka soo qabaqaabsahay tanka .
Tartanka quraankamagaaloyinka Puntland oo ay markii ugu horaysay la qabtay sanadkii hore waxaamaalgalinaya shirkada isgaarsinta ee golis iyo salaam banka.
Sheikh Maxamed Faahiye Ciise gudoomiye ku xigeenka muaasastul minllhaaj ootartanka soo qabieyy ayaa ka waramaya muhiimda tartanka iyo u jeediyinka lagaleeyahay .
Siciid Xuseen Ciid madaxa suuq gaynta shirkada golis oo maalmagalinaysa tartanka quraanka kariimka ah ayaa muhimad wayn ku tilmaamayquraanka kariimka waxaana uu sheegay in ardayda sanadkan ay helidoonabaalmarino ay ku farxidoonan ka waayn kuwii sanadkii hore .
Duqa Demgada Garoowe ka si rasmi ah u furay tartankaquraanka kariimkaa ayaa dhamaan u mahadceliyey shirkadihii maalgaliyey culuma awiidiin ka isku xilqaamay tartankaquraanka kariim ah .
Sanadkasta bisha ramaadaan deeganada Puntland waxaa ka dhacataramo kala duwan oo ay ku tarmaan magaaloyinka iyo gobolada Puntland cilmigamaadiga ah ka diiniga ah waxaana sanadkii hore ka markii ugu horaysay lagabilaabay in magaaliyinku ku tartamaan quraaanka kariim ka ah.
Agoosto 10, 2012 at 9:12 pm
Mashaalaah waxa aan ku faraxsanahay quraan kariimka ah oo laa qabanayo dhalin yatra ku nool puntland laakiin aniga ahaan waxa aan tageerayaa qardho
c/laahi sh cumar says:
Agoosto 12, 2012 at 10:05 pm
Mashaa allaah aad ayaan ugu faraxsanay tartanka quraanka kariimkaa ee kafurmay caasimada p/land garowe aad ayaanu ugu mahadinaynaa shirka isgaarsiinta ee GOLIS waxaana aad ufu farxay sawarika masaajidka ALHUDA oo aan arkay